काठमाडौं । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएको करिब एक वर्ष पुग्न लाग्दै छ । तर, आफ्नो कार्यकालमा सबभन्दा धेरै प्रवक्ता फेर्ने मन्त्रीका रूपमा उनले चिनारी बनाउन पुगेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडा आफूलाई कुनै कुरामा चित्त नबुझ्नेबित्तिकै मन्त्रालयको प्रवक्ता फेर्न अग्रसर भइहाल्ने मन्त्रालय सूत्रले बतायो । यही कारण, बितेको नौ महिनाको अवधिमा उनले तीनजना प्रवक्ता फेरिसकेका छन् । पछिल्लोपटक डेढ महिनाअघि कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव सुमन दाहाललाई उनले प्रवक्तामा नियुक्त गरेका छन् । यसअघि उनी आन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्र ३ का प्रमुख थिए । तर, उक्त कार्यालय खारेज भएपछि केही महिनाअघि उनी अर्थको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा सम्हाल्न आइपुगेका थिए ।
दाहाललाई अर्थको प्रवक्ता बनाउनुअघि चन्द्रकला पौडेल प्रवक्ता थिइन् । त्यतिबेला उनी अर्थको अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका प्रमुख थिए । तर, पौडेललाई प्रवक्ता मात्र होइन, आफ्नो मन्त्रालयमै राख्न मन्त्री डा. खतिवडाले चाहेनन् । त्यसपछि प्रवक्ताबाट हटाउने उपायस्वरूप उनले आफ्नै पहलमा पौडेललाई भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा गराएको बताइन्छ ।
पौडेल अर्थको प्रवक्ता हुनुअघि सहसचिव रामशरण पुडासैनी अर्थ प्रवक्ता थिए । उनले त्यतिबेला अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । तर, पौडेल अर्थमा आएपछि सो महाशाखाको जिम्मा उनलाई दिएर पुडासैनीलाई राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा सरुवा गरिएको थियो । उक्त महाशाखामा पुडासैनीलाई सरुवा गरेपछि प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट हटाएर पौडेललाई प्रवक्ता बनाइएको थियो ।
मन्त्रालयमा आफ्ना मान्छेहरूलाई काखी च्याप्ने र अरूलाई पाखै लगाउन खोज्ने मन्त्री डा. खतिवडाको शैलीका कारण कर्मचारीहरू रुष्ट बन्न पुगेको बताइन्छ । अरू कर्मचारीहरूलाई बेवास्ता गरेर आफ्नै छोरीज्वाइँ रामशरण खरेलको कुरा मात्र सुन्ने र छोरीज्वाइँको योजनाअनुरूप काम गर्ने गरेका कारण मन्त्री खतिवडा विवादित बन्न पुगेको बताइन्छ ।